ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: မွေးနေ့မှာ မင်္ဂလာ အပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ
မွေးနေ့မှာ မင်္ဂလာ အပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ
မြန်မာ ပြက္ခဒိန် ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၉ရက်နေ့ (၀ါ) မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ တွင် ကျရောက်သော ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ မွေးနေ့ ရက်မြတ်တွင် အမှတ်တရ မွေးနေ့ လက်ဆောင် အဖြစ် သမီးဦးလေး ကို မွေးဖွား ပေးလိုက် ပါသည်။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ တွင် သဘာဝ အတိုင်း မွေးဖွား ခဲ့ကြသော မွေးနေ့တူ သားအဖ သက်ထက်ဆုံး လွတ်လပ် ပျော်ရွှင် အေးချမ်းသော စိတ်နှလုံးဖြင့် အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အကျိုးကို သည်ပိုး ထမ်းရွက် နိုင်ကြပါစေ။
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 10:51 PM
မမတို့ မိသားစု ပျော်ရွှင်စွာ ဘ၀ခရီးကို ဖြတ်သန်းနိုင်
Happy birthday to your daughter and husband.
Wishing your family with ultimately complete happiness.
ဟေးးး မာမီလှိုင်း)
မိခင်၊ ကလေး၊ ခင်ပွန်းသည်ပါ ကျန်းမာပါစေလို့
သမီးလေးက မေမေလို လှပြီး မေမေလို ထက်မြက်ပါစေလို့
Congratulation Nyi Ma Hlaing.
May God Bless your family.:)
သမီးလေးရော ဖေဖေမေမေပါ အေးချမ်းတဲ့ မိသားစုဘ၀လေးမှာ ဆက်လက်ပျော်ရွှင်စွာ ဆက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ။
အော်..ပျော်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ မိသားစုလေးပါလား။ အဖေနဲ့သမီးလေးက တနေ့တည်း မွေးသတဲ့။ မွေးတာကလဲ နေ့ထူးနေ့မြတ်မှာ။
သမီးရဲ့ မေမေနဲ့တကွ သမီးရတနာလေးရော သမီးရဲ့ ဖေဖေပါ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှု သရဖူ ဆောင်းနိုင်ပါစေလို့ ရင်ထဲက ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
လှိုင်ရေ… မေမေအသစ်လေးအား လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါ၏…
ထူးခြားလှပတဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုပဲညီမရေ… ဒါဟာ လွတ်လပ်ခြင်းနိမိတ်များလားထင်မိတယ်…
လှိုင်ရေ… နွေးနွေးထွေးထွေးနေ… မိခင်နို့ တိုက်တယ်ဆို အရည်များများသောက်… ကလေးလေးအိပ်ရင် လိုက်အိပ်… နားနားနေနေနေ… သွေးနုသားနုမို့လှုပ်ရှားနိုင်ရင်တောင် သိပ်မလှုပ်ရှားနဲ့ ညီမရေ… လိုတာရှိရင် အီးမေးလ်ပို့ လိုက်ညီမရေ…
ကျန်းကျန်းမာမာ မွေးဖွားနိုင်တယ်ကြားလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။
မွေးနေ့တူ သမီးအဖနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ကို ချစ်တဲ့ မလှိုင် ရွှင်လန်းငြိမ်းချမ်းစွာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
မလှိုင်နဲ့ မွေးနေ့တူမယ့် မောင်လေးနောက်တစ်ယောက်သာ ရှိလာဦးမယ်ဆိုရင် . . . ပျော်ဖို့သိပ်ကောင်းမှာပဲ လို့ ထပ်တွေးမိတယ်။
ဖေဖေ့ မှတ်တမ်း said...
26 Jan 09, 14:28
26 Jan 09, 06:27
အိမ့်ချမ်းမြေ့: အိုးးးးးးးး အမခင်မင်းဇော်ရေးထားလို့ ခုမှသိရတယ်။ congrats!! )
သူပုန်ကြီး: ဒီလိုလေးတွေနဲ့ တွေ့ တော့လဲအမောပြေပြန်တာပဲနော်thirdeye4u.22web.net
25 Jan 09, 08:22
တန်ခူး: လှိုင်ရေ… Congratulation!... မေမေအသစ်လေးကို ကြိုဆိုပါ၏…take careညီမရေ…
တန်ခူး: မခင်မင်းဇော်ရေ… သတင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါ…
22 Jan 09, 19:40
ခင်မင်းဇော်: ခွန်မြလှိုင် အင်္ဂါမနက်က သမီးလေး မွေးဖွားပါကြောင်း
20 Jan 09, 13:50
JulyDream: မဗိုက် အဆင်ပြေတယ် ဟုတ်စ
20 Jan 09, 13:35
မောင်ကျည်ပွေ့: ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဂုဏ်ယူပါကြောင်း
19 Jan 09, 00:19
Lin Min Thant: ကလေးရော မိခင်ပါ ကျန်းမာပါစေ… 17 Feb 09, 11:59
မဆုမွန်: လာလည်ပါတယ်ရှင် သမီးလေးနဲ့ မေမေ နေကောင်းပါစေ
16 Feb 09, 21:30
ဒူကဘာ: အမလှိုင်ရေ... ကလေးရော လူကြီးပါ ကျန်းမာစေကြောင်း...
14 Feb 09, 23:35
တန်ခူး: လှိုင်ရေ… နေကောင်းလား… သမီးလေးလဲ တော်တော်ဖွံ့ နေရောပေါ့…
14 Feb 09, 01:33
nadikanya: ပန်းခရေ နေမကောင်းပါသဖြင့် ဗင်လင်တိုင်းမှ ချစ်သူနှင့်ပြုံးကျော်နိုင်ပါစေဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်.
7 Feb 09, 11:18
chaos: အစ်မလှိုင်ရေ အမေရော သမီးရော ကျန်းမာပျော်ရွှင်နေကြပါစေ။ သမီးလေး ဓါတ်ပုံလဲတင်ပေးပါဦး ကြည့် ချင်လို့
7 Feb 09, 11:17
7 Feb 09, 11:14
chaos: အစ်မလှိုင် ကလေးလေး ပုံလေး တင်ပေးဦးလေ။ ကြည့်ချင်တယ်။ ကလေးရော အမေရော နေကောင်းပါစေနော်
7 Feb 09, 09:29
မင်းဒင်: မတွေ့တာကြာပါပေါ့။ မိခင်ရော ကလေးပါ ကျန်းမာပါစေဗျာ။
6 Feb 09, 05:08
မမိုး: ညီမလေးရေ..အသစ်တင်မလားလို့ လာဖတ်သွားပါတယ် ညီမလေးရဲ့ သမီးလေးက ကြီးလာရင် တော်တော်မျက်နှာချိုမယ်.အခုဘာမှမသိသေးတဲ့ အရွယ်တောင် ပြုံးနေတာပဲ။
5 Feb 09, 13:47
JulyDream: အဟဲ... သက်တော် ရာကျော် ရှည်ပါစေနော်... ဘာပြောတာလဲ ဆိုတာကို သိတယ် မဟုတ်လား။
3 Feb 09, 19:10
ဂင်ကြီး: လာလည်ပါတယ်ဗျာ ချမ်းမြေ့ပါစေ
31 Jan 09, 22:25
ဒူကဘာ: သြော်..ပျောက်ချက်သား ကောင်းတယ်လို့ ထင်နေတာ ရတနာ ဆွဲလဲ ဆင်မြန်းနေတာကိုးးးးးးးးး
ကောင်းကင်ဖြူ: မင်္ဂလာပါ ။ပျော်ရွှင်ပါစေ။
30 Jan 09, 13:36
လင်းလက်ကြယ်စင်: မင်္ဂလာပါ မမခွန်မြလှိုင်။ မင်္ဂလာသတင်းကြားရတာ ၀မ်းသာမိပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သော မိသားစုလေးကို ကျန်းမာရွှင်လန်းစွာ ပိုင်ဆိုင်ရရှိပါစေ
29 Jan 09, 13:20
182: Congrats , happy BD
26 Jan 09, 18:41
နိုင်းနိုင်းစနေ: မာမီလှိုင်.. ချိုချိုဆာတယ် .. ဟား..ဟား.. သမီးလေးအတွက် ပြောပေးတာ ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ…
မြတ်နိုး: မွေးပီလား ဖုန်းဆက်တာမကိုင်ကြ
15 Jan 09, 20:48
တန်ခူး: ကလေးရော မိခင်ပါ ကျန်းမာပါစေ… ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ…
တန်ခူး: လှိုင်ရေ… နေကောင်းလား… dueရောက်ခါနီးနေပြီပေါ့… အထဲက ကလေးလေးက အတော်လှုပ်နေလောက်ပြီ… လမ်းလေးလျှောက်ပေးညီမရေ… အလျှောက်တော့ မလွန်စေနဲ့ … အမတုန်းက သားက နေ့ စေ့လစေ့မှ ထွက်လာတော့တာ…
လှိုင်ရေ ခုမှ လှိုင့်ဘလော့ဂ် ရောက်ဖြစ်တယ်။ သမီးဦးလေးနဲ့အတူ ဖခင်ရော မိခင်ပါ ကျန်းမာ ချမ်းသာ ကြပါစေနော်။
သမီးလေးရဲ့ အနာဂတ်ကို ဦးဆောင်ပုံဖော်ပေးနိုင်သော မိဘများ ဖြစ်ကြပါစေ။